> Resource > Windows > Sida loo dayactir Windows 7 kala sooc lahayn loo fariisiyo
Xaaladaha Windows 7 fariisiyo aad la kulmi kartaa
Windows 7 Negeria marka aad ordi barnaamij gaar ah
Windows 7 fariisiyo ee xawaaladaha (at Windows bar loading ama screen soo dhaweynayaa)
Windows 7 si lama filaan ah laga fariisiyo kuna qaylya marka aad dhexe ee shaqo muhiim ah
More iyo ka badan
Marka aad ordi barnaamij gaar ah oo aad Windows 7 Negeria waqtigan, guud ahaan waxay ku saabsan tahay darawalada aad. Waxaad u baahan kartaa inaad cusboonaysiiso wadayaasha aad, sababtoo ah arrimaha waafaqsan keeni kartaa your computer inay hakiso ilaa. Waxaad ka eegi kartaa website-ka Microsoft Windows ee updates ugu dambeeyey.
Haddii aad Windows 7 aan kala sooc lahayn ama soo noqnoqda fariisiyo, ka dibna dhibaatada la xiriira diiwaanka. Waa in ay jiraan khaladaad in aad file diiwaanka Windows. Si aad u xaliyo dhibaato noocan ahi, waxaad u baahan tahay si aad u hesho barnaamijka dhinac saddexaad ah si ay uga caawiyaan.
Wondershare LiveBoot Boot CD / USB noqon kartaa doorasho fiican. Waxaa aad u saamaxaaya in ay u ordaan your computer hoos jawi siman, iyo hagaajin khaladaad diiwaan taas oo keeni xanibay in aad Windows 7 3 tallaabooyinka.
Ka dib markii uu iibsigu barnaamijka, waxaad heli doontaa link download ka Wondershare ah. Download oo ku xidh on a computer-wanaag shaqo. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah Downlaods CD ama USB drive iyo hagaajin aad arrinta la xanibay Windows Vista ee 3 tallaabo.
Sida loo hagaajin Windows 7 fariisiyo arrinta
Orod barnaamijka iyo waxaad heli doontaa interface kii saaxir ah soo socda. Geli CD maran ama USB drive galay computer ka oo uu ku sameeyo mid ka mid click on badhanka gubashadii cagaaran ee certer sida ay shuruud yout. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sameeyaan click ah, iyo barnaamij ku dhameysan doono shaqada idiinka tegey.
Step2. Hel galay aad Windows 7 oo laga fariisiyo
Hadda, waxaad u tagi kartaa si aad Windows 7 oo laga fariisiyo kuna qaylya. Bareesada ee khaanada Downlaods CD / USB drive oo dib uga bilowdo. Marka aad aragto logo nidaamka u muuqataa, F12 jaraa'id oo isla markiiba si ay u tagaan Menu Device Boot ah. Markaas dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive", oo waxaad heli doontaa menu boot a soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot" si aad u hesho aad Windows 7.
Step3. U dayactir aad Windows 7 fariisiyo dhibaato
Ka dib is geliyey aad Windows 7, LiveBoot Wondershare ku ordi doonaa si toos ah. Waxaad tegi kartaa "Windows Recovery" menu dusheeda iyo dooran "Loading Shil Xalka". Halkan waxaad ka heli doonaa xal buuxa u hesho Windows 7 dhibaato la xanibay. Raac mid ka mid ah habka ay mid ka mid ah si aad u samaysay aad arrinta.
Marka dhibaato ma guurtada ah, uga / USB LiveBoot CD ah drive, iyo computerka aad sida caadiga ah. Markaas waxaad ka heli doontaa in aad si guul leh kabaha kartaa computer sida caadiga ah oo aan mar dambe Xayiraadda doonaa.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos in Windows 8